'Ukuhlala kwabaNgendawo 2' Ukufumana kwakhona iTreyini kunye noMhla wokuKhutshwa! - iHorror
Ikhaya Iimidlalo yevidiyo 'Ukuhlala kwabaNgendawo 2' Ukufumana kwakhona iTreyini kunye noMhla wokuKhutshwa!
'Ukuhlala kwabaNgendawo 2' Ukufumana kwakhona iTreyini kunye noMhla wokuKhutshwa!
by U-Eric Panico Juni 12, 2018
ibhalwe ngu U-Eric Panico Juni 12, 2018
Indawo yokudlala E3 Inkomfa ivele nje ityhila ulindelo olwalulindelwe ixesha elide ngo-1998 Umhlali Evil 2! Kunyaka ophelileyo Umhlali Evil 7 yayikukubuyela kwiingcambu ezothusayo ze-franchise, emva kokuba imidlalo yamva yaqala ukuthembela kakhulu kwizenzo nakwiminyhadala yexesha elikhawulezayo. Ngoku uCapcom usibuyisela ekuqaleni kwesi sifo.
Umhlali Evil 2 ngumzekelo obalulekileyo wokoyika ukoyikisa, umdlalo weatmosfera ifranchise yakhiwa kuwo, kwaye yenye yezona midlalo zibalaseleyo kuthotho. Eyokuqala Ukungcola kwabahlali ifumene i-HD ephumelele kakhulu kwi-HD ngo-2002, kwaye abalandeli baye bazibuza oko ukusukela nini Umhlali Evil 2 babeza kufumana unyango olufanayo.
Ewe, ukulinda kugqityiwe.
Itreyila ivula kwindawo enomdla xa sikhasa kwiindawo zokugcina izinto, kwaye singqina ipolisa lingena kulwa nomrhanelwa ongabonakaliyo. Njengoko ishelufu sasibotshelelwe kwiingcebiso ngaphezulu, ityhila ukuba sasiyibona le nto isenzeka ngamehlo empuku (ngoku etyumkileyo). Igosa liwela ekubonakaleni, njengoko i-perp igxuma amazinyo ayo entanyeni yephoyisa ekrazula isiqwenga senyama.
Kudubule umpu, kwaye i-zombie iwela engaphiliyo (ngokungathi, ifile) emhlabeni njengoko rookie uLeon Kennedy ebonwa emile eshukunyiswa emnyango kunye necala lakhe lokutshaya. I-trailer emva koko yasibetha nge-cacophony ye-grunge, ukukhala, kunye ne-sinew enegazi.
UCapcom ulubekile uloyiko ukuya kuthi ga kwi-11 njengoko ithoni yetreyila ihambe mnyama kakhulu kwaye inamandla ngakumbi (ngokufanayo Umhlali Evil 7). Sikwabona uClaire Redfield onenzondelelo emenza abuye ngoloyiso.
ISixeko saseRaccoon asikaze sifezeke ngokumangalisayo njengoko sinqumla kwizitalato ezilahliweyo, ezigcwele imvula, ukuya kwiindawo ezoyikisayo, ezigcwele igazi. I-trailer ineqhayiya elinamandla, ukukhanya okumangalisayo, kunye neempawu ezibonakalayo ezimfiliba, kunye neemodeli zabalinganiswa ezintle. Iimoto ziyavutha, zombies ziyangqubeka kwikona nganye, kwaye sikhe sibone ezinye zezinto ezicekisekayo ezazisikhathaza ngamaphupha amabi. IZombies, kunye neLickers, kunye nooTyrants… oh wethu.
Imidlalo uxela ukukhutshwa kweendaba kuqinisekisa umdlalo obuyiselweyo ubuyile umva Umhlali Evil 7's Umntu wokuqala i-POV kumntu wesithathu ngaphezulu kwegxalaba. Nangona kunjalo, umdlalo weqonga ubonakala ngathi ulumke ugcina ukugxila kwinto eyoyikekayo ngokuchasene nesenzo esikhawulezayo. I-Zombies zixelwe ukuba zithathe "umonakalo obonakalayo kwangoko" ngexesha langempela.
Ngombulelo, abalandeli abayikulinda ixesha elide ukuba bahambe ngezitrato ezizele zizixeko zeRaccoon kwakhona. Itreyila iyaphela eqinisekisa ukukhutshwa komhla kaJanuwari 25thIi-odolo zangaphambili ziyafumaneka ngoku ukuthenga umdlalo kwi-Playstation 2019, kwi-Xbox One nakwi-PC.
Inye into eqinisekileyo… ukubambelela kwilizwi ngokuqinisekileyo kuphuculwe.
Jonga itreyila apha:
Ucinga ntoni ngayo erhuqwayo ?! Ngaba wonwabile ukubuyela kwiRaccoon City? Thumela iingcinga zakho kwizimvo!
I-Biohazardbiohazard 2CapcomE3Ukungcola kwabahlaliumhlali ongendawo 2
'Ilifa' lelona vulo lukhulu kwi-A24 kwiBhokisi yeOfisi
'Ukufa okuswelekileyo' I-E3 yeWarley Wows ngokuQondanisa ngokuQina
I-Crypt TV kunye neQela eliFileyo 'eliFileyo ...
'Ububi baseNtshona' budibanisa iRootin, iTootin iShot-Shootin kunye needemon ...
'Indawo yabahlali abaMbi baseDolophini' iTrailer entsha ityhila iimfihlakalo ezingakumbi
UDino Shooter 'Ukupheliswa kwesiBini' uyeza ngo-Epreli
I-HP Lovecraft's 'Arkham Horror: Ukwamkelwa kukaMama' kungena ...
'Umhlali wobubi Re: iVesi' Vula iBeta iza ngo-Epreli
Matshi 23, 2021
'I-Stubbs iZombie: Kwimvukelo ngaphandle kwePulse' ...
Matshi 17, 2021
'Iintshukumo eziguqukayo zentsha yeNinja: Ukuziphindezela kukaShredder' kusithatha ...
'Abaphambukeli: I-Fireteam' iTreyila ikukufaka kunye ne-Co-Op yakho ...
Matshi 2, 2021
IXenomorph ibonakala ngathi iyawa kwi 'Fortnite' ...